Rafitra fitantanana ny fananan-tany mitaky fotoana maharitra | Zeevou Features
Manàna topy maso tsara momba ny zava-bitan'ny orinasanao amin'ny fotoana rehetra - na ara-bola izany, na hipetrahana na hiasa.
Na inona na inona orinasa misy anao - ny angona no lakilena. Mampalahelo fa miankina amin'ny mpamatsy lozisialy ny ankamaroan'ny orinasa hanampiana azy ireo hitantana ny orinasany, satria matetika dia tsy mandany vola na mandany fotoana ny fampivoarana ny anao manokana.
Tsy maningana amin'izany ny orinasa mandray vahiny. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny angona dia voatazona ao anaty tahiry iray avy amin'ny Channel Manager, System Management System, na Central Reservation System. Na izany aza, ny angona dia tsy azo idirana amin'ny endrika mahasoa ny mpampiasa foana. Matetika amin'ny fampifangaroana sombim-baovao izay ilaina avy amin'ny sehatry ny fandraharahana hanampiana hahatakatra ny fahombiazan'ny lafiny tsirairay amin'ny orinasa, fa tsy ny sary iray manontolo.
Ahoana no hanampian'ny Zeevou ny tatitra amin'ny fotoana tena izy?
Zeevou dia namolavola ny rafitry ny fitantanana ny fananany amin'ny tatitra momba ny fotoana tena izy. Io dia ahafahanao mihazakazaka tatitra isan-karazany miaraka amin'ny fanadihadiana amin'ny antsipiriany. Ny tatitra tsirairay dia azo sivana arakaraka ny fepetra maro. Afaka manapa-kevitra ny mpampiasa ny tsanganana tian'izy ireo haseho, ary ny filaharana. Ny angon-drakitra Zeevou dia azo aondrana sy alaina amin'ny fotoana rehetra toy ny CSV na XLSX.
Zeevou dia manolotra tatitra ara-bola isan-karazany - manomboka amin'ny tatitra momba ny faktiora ka hatramin'ny fandoavam-bola. Izahay koa dia manome famakafakana efa an-trano momba ny varotra, ny haavon'ny toerana onenana ary ny famandrihana. Ireo mpampiasa dia tsy vitan'ny hoe mirakitra ny fidiram-bolan'izy ireo fa koa ny fandaniana. Zeevou dia eo amin'ny toerana tsy manam-paharoa afaka manolotra fikajiana tombony mandeha ho azy ho an'ny mpampiantrano sy ny mpampiasa vola amin'ny fotoana tena izy. Io dia ahafahan'ny mpiaro antsika manana topy maso momba ny zava-bitan'ny orinasany amin'ny ambaratonga samihafa.
Tatitra momba ny serivisy ho an'ny mpanjifa
Ny tatitra ataontsika amin'ny fotoana tena izy dia tsy voafetra amin'ny vola, fitantanana kaonty ary fitantanana vola miditra ihany. Namolavola tatitra momba ny asa maromaro ihany koa izahay izay azon'ny mpampiasa anay, ny mpiasa ao aminy ary ireo orinasa avy any ivelany ampidirina. Ireo dia mamela ny fampitana vaovao eo amin'ny mpandray anjara miaraka amin'ny fanamorana, ary ny fanalefahana ny asa manomboka amin'ny fisavana, hatramin'ny fikarakarana trano ary ny fikojakojana.